Woyɛ Yehowa Akoa​​—Som No (Romafo 12:​11) | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Woyɛ Yehowa Akoa—Som No
“Monnyɛ mo adwuma anihaw so. . . . Monsom Yehowa.”—ROM. 12:11.
Ɔsom bɛn na Romafo 12:11 ka ho asɛm?
Dɛn na yɛbɛyɛ na Satan ne wiase no amfa yɛn anyɛ nkoa?
Nhyira bɛn na Yehowa de ma ne nkoa?
1. Sɛ yɛka sɛ obi yɛ akoa a, dɛn na ɛba nnipa pii adwenem, nanso dɛn na Romafo 12:11 hyɛ ho nkuran?
SƐ YƐKA sɛ obi yɛ akoa a, nea ɛba nnipa pii adwenem ne obi a wɔhyɛ no so, obi a wɔyɛ no ayayade, anaa obi a wosisi no. Nanso sɛ yɛka sɛ obi yɛ Onyankopɔn akoa a, ɛnyɛ saa na ɛte koraa. Bible ka sɛ nkoa bi wɔ hɔ a, wɔdɔ wɔn wura, enti wɔn ankasa yi wɔn yam som no. Bere a ɔsomafo Paulo tuu tete Kristofo fo sɛ ‘wɔnsom Yehowa’ no, na ɔrehyɛ wɔn nkuran sɛ wɔmma ɔdɔ a wɔwɔ ma Onyankopɔn mpusuw wɔn ma wɔnsom no. (Rom. 12:11) Ɛnde, sɛ obi yɛ Onyankopɔn akoa a, dɛn na ɛkyerɛ? Dɛn na yɛbɛyɛ na Satan ne wiase no amfa yɛn anyɛ nkoa? Sɛ obi yi ne yam som Yehowa a, dɛn na obenya?
“MEDƆ ME WURA”
2. (a) Tete Israel no, sɛ akoa bi bere sõ mpo a, dɛn na ɛbɛma wakɔ so atena nkoasom mu? (b) Dɛn nti na ɛnyɛ nwonwa sɛ akoa no aso na wofiti?
2 Yɛhwɛ Mmara a Onyankopɔn de maa Israelfo no a, ɛma yehu nea Yehowa hwehwɛ fi ne nkoa hɔ. Tete no, sɛ Hebrini bi yɛ akoa a, afe a ɛto so ason no ɔfa ne ho di koraa. (Ex. 21:2) Nanso ebia na akoa no dɔ ne wura enti ɔpɛ sɛ ɔkɔ so ara som no. Ná Yehowa ayɛ eyi ho nhyehyɛe fɛfɛɛfɛ bi. Akoa no wura de no betweri ɔpon anaa apongua ho na ɔde fitii abɔ n’asom tokuru. (Ex. 21:5, 6) Adɛn nti na akoa no aso na na wofiti? Asɛmfua osetie kyerɛ sɛ obi bɛyɛ aso atie asɛm. Enti sɛ akoa no pene so ma ne wura fiti n’aso a, ɛkyerɛ sɛ ɔno ankasa na ɔde ne ho ama ne wura no sɛ ɔbɛkɔ so asom no na wayɛ osetie ama no. Yɛn nso Onyankopɔn ho dɔ na ɛka yɛn ma yɛyɛ osetie ma no, na ɛno ara na ɛkanyan yɛn ma yehyira yɛn ho so ma no.
3. Dɛn na ɛma yehyira yɛn ho so ma Onyankopɔn?
3 Bere a yɛkae sɛ wɔmmɔ yɛn asu no, na yɛasi gyinae dedaw sɛ yɛbɛsom Yehowa, kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ n’akoa. Ná yɛn koma so ade ne sɛ yebetie Yehowa na yɛayɛ n’apɛde, na ɛno na epiaa yɛn ma yehyiraa yɛn ho so maa no. Obiara anhyɛ yɛn sɛ yenhyira yɛn ho so. Nokwasɛm ne sɛ mmofra mpo, ansa na wɔbɛbɔ asu no, na wɔn ankasa ahyira wɔn ho so ama Yehowa dedaw; ɛnyɛ sɛ wɔrebɔ asu de asɔ wɔn awofo ani. Yɛn wura ne Yehowa, na ade titiriw a ɛka yɛn ma yehyira yɛn ho so ma no ne ɔdɔ. Ɔsomafo Yohane kyerɛwee sɛ: “Eyi ne nea Onyankopɔn dɔ kyerɛ, sɛ yebedi n’ahyɛde so.”—1 Yoh. 5:3.
YƐADE YƐN HO, NANSO YƐYƐ NKOA
4. Dɛn na ehia na yɛabɛyɛ “trenee nkoa”?
4 Yɛda Yehowa ase paa sɛ n’adaworoma wama yɛabɛyɛ ne nkoa! Yɛwɔ Kristo agyede afɔre no mu gyidi, enti yebetumi ade yɛn ho afi bɔne kɔndua ase. Seesei bɔne da so ara wɔ yɛn ho, nanso yɛn ara yefi yɛn pɛ mu de yɛn ho akɔhyɛ Yehowa ne Yesu ase. Paulo kyerɛkyerɛɛ saa asɛm no mu wɔ ne krataa biako mu. Ɔkae sɛ: “Mummu mo ho sɛ moawu ama bɔne, na mote ase ma Onyankopɔn wɔ Kristo Yesu mu.” Afei ɔbɔɔ kɔkɔ sɛ: “Munnim sɛ obiara a mode mo ho ma no sɛ nkoa na mutie no no, tie a mutie no nti ɔno na moyɛ ne nkoa, sɛ́ ɛyɛ bɔne a ɛkɔ owu mu anaa osetie a ɛkɔ trenee mu no? Nanso aseda nka Onyankopɔn sɛ na moyɛ bɔne nkoa, na afei de mufi koma mu ayɛ osetie ama nkyerɛkyerɛ a wɔde mo ahyɛ ase no. Yiw, esiane sɛ wɔma modee mo ho fii bɔne ho nti, mobɛyɛɛ trenee nkoa.” (Rom. 6:11, 16-18) Hyɛ no nsow, ɔsomafo no kae sɛ ‘osetie no fi komam.’ Nokwasɛm ne sɛ, sɛ yehyira yɛn ho so ma Yehowa a, na yɛabɛyɛ “trenee nkoa.”
5. Apereperedi bɛn na ɛkɔ so wɔ yɛn nyinaa mu, na dɛn ntia?
5 Nanso sɛ yebetumi adi ɛbɔ a yɛahyɛ Yehowa sɛ yɛbɛyɛ ne nkoa no so a, akwanside bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yedi so. Yɛne nneɛma abien bi redi asi. Nea edi kan ne nea Paulo kaa ho asɛm no. Ɔkae sɛ: “Me mu de, m’ani gye Onyankopɔn mmara ho yiye, nanso mihu mmara foforo bi wɔ m’akwaa mu a ɛne m’adwene mu mmara ko na ɛfa me dommum ma bɔne mmara a ɛwɔ m’akwaa mu no.” (Rom. 7:22, 23) Yɛn nso, yɛn sintɔ ko tia yɛn, enti da biara yɛne honam akɔnnɔ di apere. Ɔsomafo Petro tuu yɛn fo sɛ: “Monyɛ sɛ wɔn a wɔade wɔn ho, nanso mommfa mo ahofadi no nnyɛ bɔne nkataanim, na mmom sɛ Onyankopɔn nkoa.”—1 Pet. 2:16.
6, 7. Dɛn na Satan yɛ ma wiase no yɛ akɔnnɔ?
6 Ade a ɛto so abien a yɛne no di asi ne wiase a adaemone akɛntɛn so yi. Satan na odi wiase yi so, na nea esi n’ani so ara ne sɛ ɔbɛsɛe yɛne Yehowa ne Yesu ntam. Ɔbonsam pɛ sɛ ɔde nneɛma a ɛwɔ wiase dɛɛdɛɛ yɛn ma yɛbɛyɛ ne nkoa. (Monkenkan Efesofo 6:11, 12.) Ɔkwan biako a Satan fa so ne sɛ ɔma wiase nneɛma yɛ akɔnnɔ sɛnea ɛbɛtwetwe yɛn ma yɛadi akyi. Ɔsomafo Yohane bɔɔ kɔkɔ sɛ: “Sɛ obi dɔ wiase a, Agya no dɔ nni ne mu; efisɛ nea ɛwɔ wiase biara—ɔhonam akɔnnɔ ne aniwa akɔnnɔ ne asetena mu nneɛma a nnipa de hoahoa wɔn ho—emfi Agya no, na mmom efi wiase.”—1 Yoh. 2:15, 16.
7 Ɛnnɛ, nea obiara pɛ ne sɛ obenya ne ho. Satan pɛ sɛ nkurɔfo nya adwene sɛ, sika na ɛma nnipa ani gye. Sotɔɔ akɛse akɛse abu so, na nkurɔfo bɔ nneɛma ho dawuru de hyɛ nnipa adwenem sɛ ɛsɛ sɛ wonya ahode pii na wogye wɔn ani. Nnwumakuw bi de nkurɔfo tutu akwan kɔhwehwɛ mmeae a ɛyɛ anika, na sɛ onua bi anhwɛ yiye a nnipa a wiase agye wɔn adwene na ɔne wɔn bedi hwebom. Baabiara a yɛbɛfa biara nnipa tu gu yɛn asom sɛ yɛnyɛ nneɛma a ɛbɛma yɛadi yiye wɔ wiase no ani so.
8, 9. Dɛn na ebetumi de yɛn ayɛ nkoa, na dɛn ntia?
8 Ná tete Kristofo asafo no mufo bi ama wiase no agye wɔn adwene, enti Petro kae sɛ: “Wobu ɔhonam akɔnnɔ a wodi akyi awiabere no sɛ anigyede. Wɔyɛ nkekae ne dɛm, na nea wɔn ani gye ho ara ne sɛ wɔde atoro nkyerɛkyerɛ bɛdaadaa mo bere a wɔne mo bom didi no. Na wɔkeka akokurokosɛm a mfaso biara nni so, na wɔnam ɔhonam akɔnnɔ ne ahohwibra so to wɔn a afei na wɔatetew wɔn ho afi nnebɔneyɛfo ho no brada. Wɔhyɛ wɔn bɔ sɛ wɔbɛma wɔade wɔn ho, nanso wɔn ankasa yɛ ɔporɔw nkoa. Efisɛ sɛ obi di ɔfoforo so a, ɔde no yɛ akoa.”—2 Pet. 2:13, 18, 19.
9 Sɛ obi di “aniwa akɔnnɔ” akyi a, na ɔnnee ne ho. Mmom na wabɛyɛ Satan Bonsam akoa, efisɛ ɔno ne wiase yi wura. (1 Yoh. 5:19) Sɛ yɛamma yɛn ani anna hɔ paa a, ahonyade de yɛn bɛyɛ nkoa, na ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛtete yɛn ho.
ADWUMA A ƐMA AKOMATƆYAM
10, 11. Henanom titiriw na Satan atu n’ani asi wɔn so? Ɔkwan bɛn so na wiase nhomasua betumi atwitware wɔn anan mu?
10 Ɛnnɛ, Satan de n’ani asi wɔn a wonni suahu so sɛnea ɔyɛe wɔ Eden turom no. Mmerante ne mmabaa paa na Satan atu n’ani asi wɔn so. Sɛ aberante anaa ababaa anaa obi foforo biara tu ne ho si hɔ sɛ ɔbɛsom Yehowa a, ɛnyɛ Satan abodwo koraa. Sɛ obi hyira ne ho so ma Yehowa a, nea Onyankopɔn tamfo Satan pɛ ne sɛ onii no de ne som bɛkɔ akɔso kwan mu.
11 Momma yɛnsan nhwɛ akoa a ɔmaa ne wura fitii n’asom no. Ahyɛase no deɛ ɛbɛyɛ akoa no yaw kakra, nanso ɛrenkyɛ ebedwo no na agyaw etwa bi a ɛbɛkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ so som ne wura. Yɛnhwɛ aberante anaa ababaa bi a n’atipɛnfo nyinaa rekɔ benkum na ɔno nko ara pɛ sɛ ɔkɔ nifa; ebetumi ayɛ den ama no paa. Satan ama nnipa anya adwene sɛ, sɛ obi nya baabi gyina wɔ wiase yi mu a, ne ho bedwo no, nanso nea ɛsɛ sɛ Kristofo ma ɛda wɔn koma so ne sɛ wɔde Yehowa bedi kan wɔ wɔn asetenam. Yesu kae sɛ: “Anigye ne wɔn a wonim wɔn honhom mu ahiade.” (Mat. 5:3) Kristofo ahyira wɔn ho so sɛ wɔbɛyɛ Onyankopɔn apɛde na ɛnyɛ Satan apɛde. Wɔn ani gye Yehowa mmara ho na wodwen ho awia ne anadwo. (Monkenkan Dwom 1:1-3.) Nanso ɛnnɛ, wohwɛ sɛnea wɔahyehyɛ wiase nhomasua a, ɛnyɛ mmerɛw sɛ Yehowa akoa benya bere adwinnwen honhom mu nneɛma ho na wasom Yehowa yiye.
12. Dɛn na ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ aberante anaa ababaa paw biako?
12 Sɛ obi a ɔnyɛ Kristoni fa Kristoni de no yɛ akoa a, ɔhyɛ no so paa. Bere a Paulo kyerɛw ne krataa a edi kan kɔmaa Korintofo no, obisae sɛ: “Wɔfrɛɛ wo no na woyɛ akoa anaa?” Afei ɔkae sɛ: “Mma ɛnnhaw wo; nanso sɛ wubetumi ade wo ho nso a, de wo ho.” (1 Kor. 7:21) Sɛ akoa no betumi ade ne ho a, ɛnde na ɛyɛ papa sɛ ɔyɛ saa. Ɛnnɛ aman pii so no, aban ahyɛ mmara sɛ ɛsɛ sɛ abofra biara kɔ sukuu kodu baabi. Afei sɛ abofra no wie na sɛ ɔpɛ sɛ ɔtoa so a, obetumi ayɛ saa; ɔpɛ nso a, ɔde besi hɔ ara. Sɛ obi de si n’ani so sɛ ɔbɛkɔ sukuu akɔ akyiri na wanya baabi agyina wɔ wiase yi mu a, nhomasua betumi de no ayɛ akoa, na ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛyɛ bere nyinaa som adwuma no.—Monkenkan 1 Korintofo 7:23.
Hena na wopɛ sɛ woyɛ n’akoa?
NHOMASUA A ƐKƆ AKYIRI ANAA TEOKRASE NTETEE?
13. Ntetee bɛn na ɛboa Yehowa asomfo paa?
13 Paulo bɔɔ Kristofo a na wɔwɔ Kolose no kɔkɔ sɛ: “Monhwɛ yiye: anhwɛ a obi de nyansapɛ ne nnaadaa hunu a egyina nnipa atetesɛm ne wiase mu nneɛma so a ennyina Kristo so bɛfa mo nnommum.” (Kol. 2:8) Nhomanimfo pii kyerɛkyerɛ “nyansapɛ ne nnaadaa hunu a egyina nnipa atetesɛm” so. Mpɛn pii no saa nneɛma yi na wɔn a wɔkɔ sukuu kɔ akyiri no kosua. Enti wobewie no na wonni nsaanodwuma biara a wɔde bɛbɔ wɔn bra. Nanso Yehowa asomfo sua biribi a ɛbɛboa wɔn ma wɔanya adwuma kakra bi atwitwa wɔn ho na wɔanya bere pii asom Onyankopɔn. Wotie afotu a Paulo de maa Timoteo no gu aso pa mu. Paulo kae sɛ: “Nokwasɛm ni, mfaso kɛse wɔ onyamesom pa ne nea obi wɔ a ɔma n’ani sɔ so. Enti sɛ yɛwɔ yɛn ano aduan ne nea yɛde kata yɛn ho a, yɛbɛma ɛno ara adɔɔso ama yɛn.” (1 Tim. 6:6, 8) Nokware Kristofo mpere sɛ wobenya digrii anaa abodin akɛse akɛse, mmom nea esi wɔn ani so ara ne sɛ wɔde nsi ne ahokeka bɛyɛ pii wɔ asɛnka adwuma no mu na wɔanya nea Bible frɛ no ‘adansedi krataa.’—Monkenkan 2 Korintofo 3:1-3.
14. Sɛ yɛhwɛ Filipifo 3:8 a, yehu sɛ na Paulo bu hokwan a wanya abɛyɛ Onyankopɔn ne Kristo akoa no sɛn?
14 Yɛnhwɛ ɔsomafo Paulo. Osuaa ade wɔ Yudani mmaranimfo Gamaliel nan ase. Sukuu a Paulo kɔe no te sɛ sukuupɔn nnɛ. Nanso bere a Paulo de ne nhomasua no totoo hokwan a wanya abɛyɛ Onyankopɔn ne Kristo akoa ho no, dɛn na ɔkae? Ɔkae sɛ: “Mibu nneɛma nyinaa sɛ adehwere m’Awurade Kristo Yesu ho nimdeɛ a ɛkyɛn so no nti.” Afei ɔtoaa so sɛ: “Ɔno nti na mibu nneɛma nyinaa adehwere na mibu no sɛ nwura dodow, na matumi anya Kristo.” (Filip. 3:8) Sɛ awofo ne wɔn mma mmerante anaa mmabaa tena ase susuw Paulo asɛm yi ho a, ɛbɛboa wɔn ma wɔasi gyinae pa wɔ nhomasua ho. (Hwɛ mfonini no.)
TEOKRASE NTETEE—ƐSO MFASO
15, 16. Ntetee bɛn na Yehowa ahyehyɛde no de ma yɛn, na ne botae ne sɛn?
15 Sɛ wokɔ suapɔn ahorow mu a, nneɛma bɛn saa na ɛkɔ so wɔ hɔ? Ɛtɔ da a nea wuhu ne akakabensɛm, amanyɔsɛm ne atuatew. (Efe. 2:2) Nanso Yehowa ahyehyɛde no ma yɛn ntetee a ɛkorɔn paa. Yenya ntetee a ɛte saa wɔ Kristofo asafo no mu; ɛhɔ deɛ yetumi sua ade asomdwoe mu. Nnawɔtwe biara yɛyɛ Teokrase Ɔsom Sukuu, na yɛn mu biara betumi de ne ho ahyem. Ɛno akyi no, yɛwɔ sukuu a wɔhyɛ da yɛ ma anuanom mmarima akwampaefo a wɔnwaree a yɛfrɛ no Bible Sukuu a Wɔyɛ Ma Anuanom Mmarima Asigyafo. Bio nso yɛwɔ sukuu bi a wɔyɛ ma awarefo a wɔyɛ akwampaefo. Yɛfrɛ no Bible Sukuu a Wɔyɛ Ma Kristofo Awarefo. Teokrase ntetee a ɛte saa boa yɛn ma yɛyɛ osetie ma Yehowa, yɛn wura pumpuni a ɔwɔ soro no.
16 Bio, yebetumi anya honhom fam akorade a ɛsom bo pii wɔ Watch Tower Publications Index mu anaa Watchtower Library a ɛwɔ CD-ROM so. Yɛn ntetee no botae nyinaa ne sɛ ɛbɛboa yɛn ma yɛasom Yehowa yiye. Ɛma yehu ɔkwan a yɛbɛfa so aka nkurɔfo aba Onyankopɔn nkyɛn. (2 Kor. 5:20) Afei wɔn a yɛkyerɛkyerɛ wɔn no nso betumi akyerɛkyerɛ afoforo.—2 Tim. 2:2.
AKOA NO NHYIRA
17. Sɛ yɛpaw teokrase ntetee a, mfaso bɛn na yenya?
17 Bere a Yesu de dwetikɛse ho mfatoho mae no, owura no kamfoo nkoa baanu a wodii nokware no. Nkoa no ne wɔn wura nyinaa ani gyei, na owura no de nnwuma pii hyɛɛ nkoa no nsa. (Monkenkan Mateo 25:21, 23.) Sɛ yɛpaw teokrase ntetee a, ɛbɛma yɛn koma atɔ yɛn yam na yɛanya nhyira pii. Wo deɛ ma yɛmfa Michael asɛm yi nyɛ nhwɛso. Bere a ɔwɔ sukuu no na waben paa, enti akyerɛkyerɛfo ne no susuw ho sɛ anka ɔnkɔ sukuupɔn. Nanso Michael amfa ne ti annye. Mmom ɔkae sɛ ɔpɛ sɛ ɔde bere tiaa bi sua nsaanodwuma sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi ahwɛ ne ho na wayɛ akwampae adwuma no. Onuu ne ho sɛ wankɔ sukuupɔn anaa? Dabi. Mmom ɔkae sɛ: “Akwampae adwuma no ama masua nneɛma pii. Seesei meyɛ ɔpanyin, na ɛno nso ama manya Bible mu ntetee pii. Na sɛ mehwɛ nhyira ne hokwan a manya a, metumi aka sɛ ɛsom bo koraa sen sika biara a anka menya wɔ wiase. Nokwasɛm ni, ɛyɛ me dɛ paa sɛ mankɔ sukuupɔn.”
18. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wopaw teokrase ntetee?
18 Teokrase ntetee ma yehu Onyankopɔn apɛde, na ɛboa yɛn ma yɛsom Yehowa yiye. Bio, ɛbɛma yɛanya hokwan nwonwaso bi: Yebenya “ahofadi afi ɔporɔw nkoasom mu” na awiei koraa no, yɛanya “Onyankopɔn mma anuonyam ahofadi.” (Rom. 8:21) Nea ɛsen ne nyinaa no, sɛ yɛpaw teokrase ntetee a, ɛkyerɛ paa sɛ yɛdɔ yɛn wura Yehowa ampa.—Ex. 21:5.